Ihe omumu nke ichekwa na imefu ego | Martech Zone
Mmebe nke vingchekwa na Emefu
Wednesday, September 19, 2012 Douglas Karr
Dị ka ndị ahịa, mgbe ụfọdụ nnukwu nsogbu anyị na-enweta ịzụta mkpebi mkpebi ịzụta. Ndị mmadụ amaghị ya, mana enwere sayensị na mmemme ahụ. Ọ bụ ezie na infographic a na-elekwasị anya na echiche nke mkpebi nzụta nke ndị na-azụ ahịa, ndị na-ere ahịa kwesịrị ilekwasị anya n'otú ha nwere ike isi nyere aka na usoro ahụ site na imewe, nkwakọ ngwaahịa, izi ozi na itinye aka. Hụ ụgbọ ala ịzụ ahịa ahapụlarị na ndị ọbịa bounced - wee nwalee ọdịiche dị iche iche - nwere ike wepu ihe mgbochi ịbanye.
Isi ihe oyiyi: Ego
Ndi Marketiphrasing bu oke uzo?
5 Ga-Hụ Nlereanya Mgbasa Ozi Dijitalụ
Sep 24, 2012 na 8:24 PM
Daalụ maka nkọwa nkọwa a na-akọwa ọdịiche na ego na ichekwa. Ihe kachasị mma banyere post a bụ na anyị ga-aghọta njedebe nke imefu oke ma e jiri ya tụnyere ịchekwa ihe ahụ. Ekele maka nnukwu ntinye a.